विधान अनुमोदन गर्न काँग्रेस बैठक बस्दै - London Nepal News
२८ माघ २०७५, सोमबार १३:१९
केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि स्वतः बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा अल्झिएको प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सोमबार बस्दैछ ।
तर, देउवा निकट सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैठकमा छलफल गरेर जे निश्कर्ष आउँछ त्यही निर्णय सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘धारणा राख्न समय मागिएमा त्यस विषयमा छलफल होला, नत्र आजै बैठक सकिन्छ । नेविसंघको पनि छिनोफानो हुन्छ र विधान पनि अनुमोदन हुन्छ,’ डा. महतले बताए ।
उता नेविसंघका विषयमा पनि नेताहरुबीच फरक–फरक मत सार्वजनिक भएको छ । दुई पटक गरी पाँच महिना बढी समय थपिए पनि महाधिवेशन गर्न वर्तमान कार्यसमितिले नसकेपछि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समुह वर्तमान कार्यसमिति भङ्ग गर्ने पक्षमा उभिएको छ । तर सिटौला समुह भने त्यसको विपक्षमा रहँदै आएको छ । बैठक ११ बजेपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यलयमा बस्दैछ ।